Xisbiyada ku taramaya Doorashada Ingiriiska oo loolan adag ugu jira helidda taageerada Shacabka UK – Radio Daljir
Xisbiyada ku taramaya Doorashada Ingiriiska oo loolan adag ugu jira helidda taageerada Shacabka UK
Abriil 22, 2015 1:34 b 0
Arbaco, Abriil 22, 2015 (Daljir) — Iyadoo lagu jiro labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ololaha doorashadda dalka UK ayuu xisbi walba uu isku dayayaa inuu iibiyo siyaasaddiisa, waxayna doorashadani imaanaysaa shan sanadood kaddib; iyadoo la og-yahay in xisbina aanu aqlabiyad buuxda heli doonin.
Labada xisbi ee ugu cad-cad doorashadan ee kala ah xisbiga shaqaalaha (Labour) iyo midka muxaafadka (The conservative) midkoodii kuraas ka badan midda uu helo kan kale wuxuu u bahnaan donaa tageerada xisbiyada yar-yar si ay dowlad-wadaag ah u soo dhistaan.
Dadweynaha Ingiriiska ayaa si aan hore loo arag muddo sanooyin ah kaddib isku-diwaan-galiyay doorashadan sidii ay codkooda u dhiibtaan maalinta ay doorashadu dhacayso oo ah 07-da May, 2015. Iyadoo xeel-dheerayaasha siyaasadda UK ay ku macnayeen dadka oo dareemay in codkooda ay ku diraan farriinta ay doonayaan.
Xisbiga wadaniga Scotland (SNP) iyo haweenayda hohgaamisa ee Nicola Sturgeon ayaa wac-daro lasoo baxay toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan iyadoo aad uga soo dhex-muuqatay labadii dood ee talafeennashada Britain ay qabteen, halkaasoo haweenaydan ay sare u kacday qiimeynteeda siyaasadeed iyo tan xisbigeeda.
Haweenaydan ayaa shacbiyad badan ku yeelatay gobolka Scotland, iyadoo la sadaalinayo in xisbigeedu uu heli doono illaa 50-kursi oo ka mid ah kuwa baarlamaanka Britain. waxaana xisbigii hela 326-kursi uu awood u heli doono inuu soo dhiso dowlad, balse labada xisbi ee ugu waaweyn UK midkoodna ma heli doono sida lagu ogaaday cod-bixin tijaabo ahayd oo marar badan la sameeyay.
Arrimaha ugu Muhiimsan ee Xisbiyadu ay Doorashada ku Galayaan;
Doorashadan ayay xisbiyada ku loolamaya talada dalka Britain waxayna diiradda ku sareen arrimaha ay ka midka yihiin; dhaqaalaha, caafimaadka iyo socdaalka.
Xisbiga shaqaalaha oo bulshada soo galootiga ah ay inta badan codadkooda siiyaan ayaa doorashaddan diiradda ku saaray caafimaadka, sare u qaadida heerka nolosha bulshadda iyo in shirkaddaha waaweyn ay bixiyaan cashuur ka badan intii hore ay u bixin jireen iyo inay dhimi doonaan lacagta amaahda ah ee ardaydu wax ku bartaan.
Sidoo kale, xisbiga shaqaalaha (Labour Party) ayaa gun-dhiga doorashadiisa ka dhigay tayeynta caafimaadka halka xisbiga muxaafadka ay ballan-qaadyadiisa ka mid yihiin inuu shaqooyin badan abuuri doono, isla markaana cashuur dhaaf ay heli doonaan dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu yar yahay. Waxaa yabooha xisbiga muxaafidka (Conservative) ka mid ah inay dhisi doonaan guryo badan.
Ra’iisul wasaaraha dalka Britain, David Cameron iyo hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha, Ed Miliband ayaa labaduba soo sharraxay musharaxiin badan oo kasoo jeedo buslshada soo-galootiga ah ee isugu jira Afrikaanka iyo Aasiyaanka, taasoo ay ku doonayaan inay ku kasbadaan tageerada dadka laga tirada badan yahay.
Soomaalida iyo Doorashadda Ingiriiska ee Sannadkan;
Soomaalida ku nool Britain ayaa si aan horay loo arag isugu diwaan-galiyay doorashadan, si ay codkooda u dhibtaan kaddib shan sano oo dowladdii xilka haysay ay soo rogtay sharciyo badan oo saameyn weyn ku yeeshay dadka soo-galootiga ah ee ay Soomaalidu ka mid tahay; shuruucdaas oo ay ka mid yihiin; kuwo ay dowladdu ku adkeysay nidaamka dal-ku-galka (Visa) iyo isku keenida qoysaska kala maqan, caawinta la siin jiray dadka dhaqaalaha soo-gala uu yar yahay oo la dhimay iyo fursadaha ay heli jireen shucuubta laga tiro badan-yahay oo yaraaday.
Bulshada Somalida ee ku nool dalka Britian ayaa badankoodu taageera xisbiga shaqaalaha, waxaana xildhibaanno xaafadeedyo Somali ah oo kusoo galay xisbiga shaqaalaha; iyadoo la rajeynayo sannadkan tiradooda xildhibaanada Soomaalida ah ay intaas ka bataan; inkastoo wali uusan jirin xildhibaan asal ahaan Soomaali ah oo hore u soo galay barlamaanka UK.
Dhanka kale, xisbiga muxaafadka ah ee ra’iisul wasaare, David Cameron ayaa qorsheynaya inay dhimaan illaa 23-bilyan misaaniyadda dowladda Britain sannadaha soo socda; taasoo saameyn toos ah ku yeelan doonta heerka nolosha iyo dhaqaalaha bulshadda dabaqadda hoose ee Britain oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
Ugu dambeyn, doorashada sanadkan ee Britain ahmyimad uma lahan shacabka Britain oo keliya, laakiinse waxaa sidoo kale isha ku haya caalamka intiisa kale; sida Mareykanka iyo Yurub; madaama UK ay sameyn muuqata ku leeyahay siyaasadda caalamka.
Khasaaraha Qarax Muqdisho ka Dhacay oo Kordhay